Ungabhala njani kwi-WhatsApp yethu? Yenza umyalelo weHGH uze udibanise i-2%
Ungabhala njani kwi-WhatsApp yethu? Yenza umyalelo weHGH uze ufumane isaphulelo se-2%
Nceda ufake i-WhatsApp ukuba awuzange wenze njalo kwisayithi elisemthethweni. ukuba awukwenzi okwamanje
I-WhatsApp ngokukhawuleza kwaye iyaqaphela ukuba ngubani oonxibelelwano bakho basebenzisa i-WhatsApp ngokufikelela kwidilesi yedilesi yefowuni.
Indlela yokuqala usebenzisa idilesi yeefowuni yeenombolo zedilesi
Gcina igama lomnxeba kunye nenombolo yefowuni kwincwadi yedilesi yefowuni yakho.
Gcina inani ngokugcwele ifomathi yamazwe ngamazwe + 66 94 635 76 37 njengo "HGH Thailand"
Vula i-WhatsApp kwaye uye kwi registrationError ithebhu.
Thepha ingxoxo entsha Icon > Vuselela.
Fumana "HGH Thailand in ingxoxo entsha kwaye qalisa ingxoxo nathi!
Indlela elandelayo ilula - ngokuchofoza kwikhonkco
Cofa kwikhonkco efonini yakho (ukuba ufake i-WhatsApp, iwindow iya kuvula ngokuzenzekelayo.
Indlela elandelayo ngokujonga ikhodi ye-QR